China mpamokatra fitaovana mpamokatra mari-pana | Chapman
Bobongolo No. CPM-181013
Famaranana ambonin'ity VID21
Fitaovana plastika PC + ABS
Ampahany lanja 23g
Part size 125.00 X 63.00 X 22.00mm
Application Indostrian'ny fitsaboana
Haben'ny bobongolo 346 X 396 X 337mm
Anaran'ny ampahany Basy fanaraha-maso ny mari-pana
Rongony bobongolo 1 + 1
mpihazakazaka Mpihazakazaka mangatsiaka ho an'ny vavahady atsimo
Bobongolo fitaovana S136
Fotoana tsingerin'ny bobongolo: 28 ny
FANOMEZANA T T
Elanelana: Ny fampiasana voalohany ny thermometre infrared dia ny fandrefesana ny maripanan'ny lohahevitra avy lavitra. Ny fitaovana dia mahasoa amin'ny toe-javatra izay sarotra ny mahatratra ilay zavatra hanoratra ny mari-pana.
Ohatra, ny thermometre IR dia mety ho mora ampiasaina rehefa mandrefy ny mari-pana amin'ireo tobim-panafody izay matetika tsy tratra. Azonao atao ihany koa ny mampiasa thermometer Infrared hanaraha-maso ny fahombiazan'ny rafitra fihenan'ny motera na hamantatra ireo toerana mafana amin'ny rafitra elektrika sy ny takelaka misy fidirana voafetra.
Mampidi-doza: Ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny halavirana dia manana tombony. Tsy ny mari-pana rehetra no azo refesina amin'ny fifandraisana mivantana aminy. Ohatra iray amin'izany ny fananganana afo.
Matetika ny mpamono afo dia mampiasa thermometer IR mba hamantarana ny toerana mafana raha sendra misy afo. Ireo fitaovana ireo dia ahafahan'izy ireo mahazo valiny marina nefa tsy hampidi-doza ny ainy.
Fampiharana thermometers tsy mifandray iray hafa dia ny fanaraha-maso ireo fitaovana indostrialy toy ny vilany, fatana ary fantsom-pandrefesana avo lenta. Amin'ireto fitaovana itanana ireto dia azon'ny mpiasa atao ny manamarina tsara ny sehatry ny rafitra misy ireo mari-pana ambony raha tsy misy fifandraisana mivantana.
Ny fandrefesana ny mari-pana any amin'ny faritra misy poizina na mampidi-doza dia azo atao ihany koa amin'ireo fitaovana ireo. Na izany aza, ny fahazoana ny mari-pana thermomère IR mety ho an'ny ohatra marina dia zava-dehibe amin'ny famakiana mari-pana marina amin'ny iray amin'ireo rindranasa ireo.
Movement: Ny thermometers IR dia fitaovana ampiasain'ny fandrefesana ny mari-pana ny zavatra izay mihetsika hatrany. Koa satria mamaly be ireo fitaovana ireo dia tsy misy hatak'andro ny fisoratana anarana ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana. Araka izany, ny thermometre IR dia mety amin'ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny zavatra mihetsika satria ny hafainganam-pandehan'ny zavatra dia tsy mitongilana ny valiny.
Ny ohatra dia mety ahitana ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny fehikibo conveyor ao amin'ny orinasa fanodinana, milina mihetsiketsika, rollers, ary zavatra hafa mihetsika izay ilaina ny fanaraha-maso ny mari-pana.
Previous: Masinina POS carte de crédit amin'ny banky
Manaraka: Mpampitohy 34 sy 4 pin